Kuwii Dartaa U Gaajoodey, Madaxweyne Ma Jeelbaad ugu Abaal Guday
Monday 11th February 2019 11:37:45 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Ugu horayn ceeb maaha in lays xidho waayo xabsiga rag baa loo sameeyey, waana waajib in la xidho cidii fal dambiyeed gaysata.
Dhanka kale waxa wax laga xumaado ah in dadka si xaqdaro ah loo xidho xuquudoodana la duudsiyo haba yaraatee waqtiga ay xidhnaayeenba,e.
Madaxweyne cid kasta oo ka mida muwaadiniinta reer somaliland oo bogcadan xukunkeeda lagugu aaminay lagu dulmiyo, waa arin aad masuuliyadeeda adi qaadayso.
waxaa muhiima inta suurta gal ah in aad xukunkaaga ka dhowrto xadhiga, cabudhinta rayidka, cadaadinta iyo waxkasta oo keenaya in bulshadu ku kala qoqobmato.
waxa jira dhalinyaro badan oo xidhan qaar faldambiyeedyo galay iyo kuwo aan waxba galin oo jeelasha ku jira.
Madaxweyne waad maqashaan filayaa dhalinyaradii kaa codsanysay in aad iska cafiso dhalinta xabsiyada ku jira iyagoo ku soo qaatey xitaa dhacdoyin aad uga sheekaysay xiligii musharaxnimadaada-kuna saabsan waqtigii SNM.
waa tan sheekadii iyo dhibaatadii aad maalintaa uga sheekaysay dhalintaas.
In adigoo safar ka yimi oo Itoobiya ku soo dhaawacmay aad ka soo lugaysay magaalada herer una soo lugaysay dhankaa iyo magaalada bali-gubadle adigoo dhaawaca oo aan socon karayn oo laba nin oo degaanka ahina ay ku sidaan, sidaad sheegtay degaankaga maad tagi karayn oo waxa ka jiray dagaalo, ehelkiinana laguuma gayn karayn oo dhaawacbaad ahayd waxaanad ka cabsatay in dhaawac culus ku soo gaadho, ama gaajo aad u naf baxdo sidaas darteed ayaad u tidhi bali-gubadle ii geeya.
ilaa herer iyo baligubadle ayaa labadii nin kula soo lugeyeen adoon afkaa cunto iyo biyo toona saarin ayaa waxa lagu soo dul jiifiyey ardaa aya lahayd islaan la odhan jiray Jamaad Aw Ismaaciil oo ay walaalo ahaayeen odaygii cago-dable.
Sidaad sheekada ku sheegtay waxa kaliya eed ka werwersanayd ayaa ahaa in aad gaajo ama dhaawac midkood u dhimato adoon shan cisho afka waxba saarin dhaawacna kuu dheeryahay oo bali-gubadlena laga wada qaxay oo aaney cidi joogin.
Ayaa Jamaad Aw Ismacil oo Alle ha u naxariistee Caga-dable xabad roodhiya uga keenay hargaysa oo xabadaa roodhiya sideed ciyaala is leh u qaybi, ayaa loo sheegay in muuse biixi uu dhaawac iyo gaajo ardaageeda la jiifo.
Jamaad waxay isu qiimaysay sideedeeda ciyaalka ah iyo ninkaa dhaawaca iyo gaajada la dul jiifa ka dib waxay ku tidhi ciyaalkii abtigiin ayaa roodhi idiin soo sidee gaadhigaa hargaysa ka imanaya ordoo qabta.
Ciyaalki hamuunta iyo gaajadii haysa darteed ayey ugu yaaceen dhankii gaadhiga loogu tilmaamay.
Xabadii roodhida ahayd ee ay sideededa caruurta ah ka qadisay ayey adi kugu qabatay oo ay doorbidey in ay caruurteedu qatanaato adna aad quudato xabada roodhida ah.
Madaxweyne maanta markaa xaq maaha kuwii iyagoo gaaja iyo diif qaba oo caruura dartaa u qaajoodey in aad xabsi iyo xadhig ugu abaal gudo oo ay maanta xabsiga ku jiraan waana mid laga subxaanalaysto ee madaxweyne sida ugu dhakhsaha badan dhaman dhalintaas xoriyadooda ha loo soo celiyo madax meel la taabtoo ka saraysaa ma jirtee.
Waxa kale oo jirta dhalinyaro darbi jiifa oo la dhibaataysnaa duruufo nololeed oo ay ka kaw tahay hoy la.aan iyo hu la.aan ay maxkamadu ku xukuntay lix bilood oo xadhiga iyadoo sababta xadhigooda ka dambaysana ay tahay mid kamida wasaaradaha dalku leeyahay oo ka dacwootey in ay ka hor mudaharaden iyo in ay maandooriyayaal isticmaalaan.
Hadaba ma kaligoodbaa maandooriye isticmaala?
maya waxa jira boqolaal kale oo maandooriye isticmaala oo aan cidina xidhin cidna waxba ku falin.
cadaadaladu waa koob mugiisu umadda dhamaantood deeqa ee yaynaan cadaalada tuurin.
Dhalinyaradaasna intii la xidhi laha waxa ka fiican in loo sameeyo meelo ay wax ku bartaan oo lagu xareeyo.
W /Q: Axmed Xarir Adam
[Daawo Live:-] Boqorka Beelaha Gabooye Oo Dhaliil Culus Ku Garaacay Xukuumadda Madaxweyne Biixi Iyo Saami Qaybsigii Oo U
''Qoloda waddani xukuumadda iyo madaxtooyada waa kuwii lahaa heshiis baanu La Galnay ee ku bushaareeyay, dee iy
Madaxweyne Biixi Oo La Kulmay Jaaliyadda Somaliland Ee Dalka Sucuudiga + Xoggigii Ugu Dambeeyay [ Sawiro ]
[Daawo Live:—] Siyaasi Maxamed Xaashi Oo Si Kulul U Difaacay Madaxweyne Biixi Iyo Xukuumaddiisa